Paakapedza kudya zvose, kwakamuka nzara huru munyika iyoyo. Naiyewo akatanga kushaiwa. Akaenda akandozvipereka mumaoko omumwe mugari wenyika iyoyo. Iye akamutumira kuminda yake kuti apote achipa nguruve chokudya. Angadai akatofara kudya mateko aidyiwa nenguruve asi hapana kana akamupa kana chinhu zvacho. Paakazobengenuka akazviti, ‘Vangani vashandi vababa vangu vane chokudya chakakwana vachitosia zvavo asi ini ndichifa nenzara kuno.’ Ndichasimuka ndiende kuna Baba vangu ndigondoti kwavari, ‘Baba ndakatadzira denga uye ndatadzawo kwamuri. Handichakodzeri kuti ndinzi mwana wenyu. Chindibatai somumwe wavashandi venyu.’ Akasimuka akaenda kuna baba vake. Asi iye achiri chinhambwe, baba vake vakamuona vakanzwa tsitsi. Vakamhanya ndokusvikomuti mbunde vakamutsvoda. Mwana uya akati kwavari, ‘Baba, ndakatadzira Wedenga uye ndakakutadzirai. Handichakodzeri kuti ndinzi mwana wenyu.’ Asi baba vakati kuvashandi vavo, ‘Kurumidzai kuuya negemenzi rakanakisisa mumupfekedze; muise ringi mumunwe wake neshangu mumakumbo, muuyewo nemhuru iya yakakodzwa muibaye, tidye tichifara nokuti mwana wangu uyu akanga afa ava mupenyu zvakare, akanga arasika zvino awanikwa.’ Ndokubva vatanga zvavo kufara zvikuru.
 Iti zii-i pana TENZI umumirire chinyararire. Usazvinetse zvako nezvomunhu anobudirira mune zvaanoita, munhu anoita zvinhu zvakaipa. Regera kuita hasha, usaite godo rega kuzvidya mwoyo zvinokupinza munezvakaipa, nokuti vakaipa vachaparadzwa asi vanotarisira naTENZI vachava ndivo varidzi venyika.
 Nokuti takaponeswa nechitarisiro ichocho. Chinhu chaunotarisira kana chichionekwa zvokutarisira hapana nokuti ndiani angatarisire chinhu chaarikuona. Asi kana tichitarisira chatisiri kuona tinochimirira nomwoyo murefu. Ndizvozvowo naMweya, anotibatsira muutera hwedu nokuti hatizivi kuti tinofanira kunamata sei. Asi Mweya pachake anotinamatira achitura femo rakadzama zvisingatauriki. Iye Mwari anoongorora hana dzavanhu anoziva zviri mupfungwa dzaMweya nokuti iye Mweya anonamatira vakarurama maererano nezvinoda Mwari. Tinozivawo kuti muna zvose, Mwari anoshanda kuti zvinakire vanhu vanomuda, vaya vakadaidzwa maererano nezviri pamwoyo pake nokuti avo vaakafanoziva akafanovarongera kuti vatodzane nechimiro choMwanakomana wake, kuti Mwanakomana iyeyo ave dangwe rehama dzake zhinji. Avo vaakafanoziva akavadaidzawo. Vaakadaidza ivavo akavaruramisa. Navavo vaakaruramisa akavapa mbiri.
2 VaTesaronika 1:4-5
 Naizvozvo isu pachedu tinodada nemi mumasangano aMwari nokuda kwokutsungirira kwenyu pakutenda mukutambudzwa kwenyu kose nenhamo dzamunotakurana nadzo. Zvose izvozvi zvinoratidza kugona kutonga kwaMwari kuti imi munokodzera kupinda muumambo hwaMwari hwamuri kutamburira
 Ava vose vakafa vachitenda vasati vagamuchira zvavakanga vatsidzirwa asi vakanga vazviona vakazvikwaziza vachiri kure. Vakanga vazviona kuti vaenzi navatorwa panyika. Vanhu vanotaura vachidaro vanoratidza pachena kuti vari kutsvaka nyika yavo. Dai vakanga vachifunga nenyika yekwavakabva vangadai vakakwanisa kuwana mukana wokudzokerako. Asi sezvazviri vari kutosuwira nyika iri nani zvichireva nyika yokudenga. Ndokusaka Mwari asinganyari kunzi Mwari wavo nokuti akavagadzirira guta.
 Saka Jakobho akashanda makore manomwe achiitira Rakeri ugariri. Pamusana pokuti aimuda, Jakobho akaona makore acho semazuva mashomanana. Jakobho akazoti kuna Rabhani, “Chindipaiwo mukadzi wangu ndichipinda naye mumba nokuti mazuva atakatarirana akwana.” Rabhani akaita mabiko ndokukoka vanhu vomunharaunda iyoyo. Akati ava manheru, Rabhani akaenda naRea akandomupereka kuna Jakobho akabva azivana naye. Rabhani akapa muranda wake wechikadzi ainzi Ziripa kuna Rea kuti ave muranda wake. Kuzoti kwaedza, Jakobho akatarisa akaona kuti ndiRea. Jakobho akati kuna Rabhani, “Ko ndicho chiiko ichochi chamandiitira? Handiti Rakeri ndiye wandakaitira ugariri? Zvino mandinyengedzerei kudai?” Rabhani ndokuti, “Kuno kwedu hazviitwe kuti muduku aroorwe dangwe richigere. Chimbopedza zvako vhiki remabiko uina Rea, tigozoti tokupa Rakeri. Asi ndokunge wabvuma zvokumushandira mamwe makore manomwe.” Jakobho akabvuma akapedza svondo iroro naRea, Rabhani akazomupawo Rakeri kuti ave mudzimai wake.
2 Samueri 5:4-5
 Dhavhidhi akanga ava namakore makumi matatu paakatanga kutonga, akatonga kwamakumi mana amakore. Akatonga vokwaJudna kwamakore manomwe nemwedzi mitanhatu ari kuHebhuroni. Akazotongawo kwaIsiraeri kwose nokwaJudha kwamakore makumi matatu namatatu ari kuJerusaremu.
Panguva yakatemwa yandakasarudza ndichatonga noruenzaniso,
nokuti chiratidzo ichocho chinomiririra nguva yacho yakatemwa chiri kumhanyira kumagumo acho; haasi manyepo. Kunyange zvikaita sezvononoka, zvimirire zvokuitika, zvinotoitika chete hazvisikuzombononoka.
 nokwaari tiitirwe nyasha sezvatiri. Tinofara nechitarisiro chembiri yaMwari. Kwete izvozvo zvoga asi kuti tinotofara mumatambudziko edu nokuti tinoziva kuti kutambudzika kunopa munhu kutirira kutirira kunopa munhu chimiro, chimiro chinopa munhu chitarisiro.
 Paakakwatanura namo yechishanu, ndakaona pasi peatari mweya yavanhu vakaurairwa shoko raMwari nouchapupu hwavakaita. Vakadaidzira nezwi guru vachiti, “samasimba changamire mutsvene wechokwadi, kuchazova riniko musati matonga nokutsividza ropa redu kuna vavo vanogara panyika?” Mumwe nomumwe wavo akapiwa gemenzi jena, vachiudzwa kuti vambozorora kashoma kusvikira uwandu hwavashandi pamwe navo nehama dzavo vaifanira kuuraiwa saivo hwakwana.